Tun Tun's Photo Diary: March 2016
2013-May-27 & 28 , စင်ကာပူမှာ တုန်းက ညအချိန်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံလေးတွေ တွေ.လို. ဒီပို.စ်လေးမှာ စုစည်းတင်လိုက်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာက ဓါတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာတွေ သိပ်မရှိတော့ အမြဲတမ်းလိုလို ဒီအထပ်မြင့် တိုက်တွေကိုပဲ ရိုက်နေရတယ်။စာဖတ်သူတွေ မြင်နေကျ စင်ကာပူက ပုံတွေလို ပဲ ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေတွေကလဲ ဘာမှ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
at 3/28/2016 02:17:00 AM Links to this post No comments:
2013-Aug-11, China Town ဘက်ကိုရောက်တုန်း Buddha Tooth Relic Temple and Museum ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် China Town လာရင် Shopping လုပ် ၊ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်စာတွေ စားပြီး ပြန်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဒီ Museum ကို မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ဒီတခါမှပဲ ဒီကို သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို. တကူးတက ထွက်လာခဲ့တာပါ။
at 3/25/2016 01:09:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Architect, Singapore
2013-May-17, စင်ကာပူက Kallang River ဘက်ကို အရင်က တခါမှ မရောက်ဖူးဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ ထဲမှာပဲ မြင်ဖူးတယ်။ MRT Circle Line ဖွင့်လိုက်မှ Kallang River ဘက်ကို အလွယ်တကူသွားလို.ရတယ်။ အရင်ကဆို Bus နဲ. သွားရမယ်ထင်တယ်။ Kallang River ကိုသွားဖို. အနီးဆုံး MRT station ကတော့ Nicole Highway MRT station ပါ။
at 3/13/2016 01:31:00 AM Links to this post No comments:
at 3/06/2016 12:52:00 AM Links to this post 1 comment:
at 3/04/2016 07:12:00 PM Links to this post No comments: